သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Interviews & Profiles » သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း
Posted by kai on Aug 15, 2012 in Interviews & Profiles, News, Opinions & Discussion | 11 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဟာ ပြစ်မှု တခုကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စ သာ ဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံတကာ စုံစမ်း ဖြေရှင်းစရာ မလိုဘဲ ပြည်တွင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွေ ထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဒေသခံတွေရဲ့ အသိပညာ မြင့်မားရေး တို့ကို ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆိုပါတယ်။ ဗွီအိုအေ ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေချိန်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို နေပြည်တော်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မေးမြန်းချက် အပိုင်းကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မေး။ ။ အခုဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာကနေ မီးမောင်းထိုး ပြီးတော့ ပြောပြလာတဲ့ အရေးကြီး ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောလာတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်က ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စပါ။ အခုဆိုလို့ရှိရင် မကြာခင်မှာ လူအခွင့်အရေး ကော်မရှင် အစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်တော့မယ်။ နောက် ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်မယ်။ နောက် နိုင်ငံတကာ အစ္စလာမ်မစ် ကောင်စီ အစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ရှိ နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဒီ မူဆလင်တွေ ပေါ့နော်။ သူတို့ကို ဗမာနိုင်ငံက အများစုက လူအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး စွတ်စွဲမူတွေ ကျနော်တို့ ကြားရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် မကြာသေးခင်ကပဲ ဒီလူနည်းစုတွေကို ကူညီဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဆော်ရေအာရေဗီးယားနိုင်ငံက ဒေါ်လာ သန်းငါးဆယ် လှူတာတို့ မကြာသေးခင်ကပဲ တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက လာပြီးတော့ အကူအညီတွေ ပေးသွားတာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတကြီး ဦးဆောင်နေတဲ့ တိုးတက် ပြောင်းလဲမူတွေရဲ့ အကောင်း သတင်းတွေကြားထဲမှာ ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံတကာက နေပြီးတော့ လူအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ ထောက်ပြပြီးတော့ ဒါဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မူတွေ ရှိနေတယ် ဆိုပြီး ထောက်ပြမှုတွေ ကြားနေရပါတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့ဒီ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သတ် လို့ သမ္မတကြီးရဲ့ အမြင်ကို ကျနော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒီဟာတော့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို ချီတက် နေတဲ့နေရာမှာ မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ဒါ တွေ့ကြုံလာတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုပါ။ ဒီလိုပဲ ချဲလင့်တွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒီရခိုင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ ကိစ္စ ကလည်း တစ်ကယ်တော့ ဒီလူတစ်စုကနေပြီးတော့ ဒီ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရာဇဝတ်မူတစ်ခုကို ကျူးလွန်လိုက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီအပေါ်မှာ မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ပြီးတော့ ဟိုဘက်အုပ်စုနဲ့ ဒီဘက်အုပ်စုနဲ့ ဖြစ်ကြပြုကြရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ အုပ်စုကြီးက သိပ်ပြီးတော့ ကြီးထွားလာတယ်။ ကြီးထွားလာပြီးတော့ အချင်းချင်း သတ်တဲ့ ဖြတ်တဲ့ အဆင့်ရောက်လာတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဆိုးတာက ခုနကလို တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် မီးရှို့ကြတယ်။ ဒီဘက်ကလည်း မီးရှို့ သူတို့ဘက် ကလည်း မီးရှို့ တစ်ခါ ဆိုရင် ကိုယ်အိမ် ကိုယ်မီးရှို့ပြီးတော့ ထွက်ပြေးပေမယ့် ဒီမီးကနေ ကူးစက်ပြီးတော့ လောင်တာတွေ ရှိတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ခုနကလို ဒီရာဇဝတ်မူ တစ်ခုပေါ်မှာ အကြောင်းပြုပြီးတော့ မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လူအုပ်စုအထိ ကူးစက်သွားပြီးတော့ ဒီလိုဖြစ်ကြ ပြုကြတာပါ။ တကယ်တော့လည်း အဲ့ဒီ့မှာ နေနေကြတဲ့ သူတွေက နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ သိပ်ပြီးတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်ပေါ့လေ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ကျနော် ပြောချင်တာက ဒီလိုဖြစ်ပျက်မူတွေဟာ ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ လူမျိုးရေးကြောင့် ဖြစ်တာ လဲမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း အခန့်မသင့်တဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရာဇဝတ်မူပေါ်မှာ ခုနကလို မခံမရပ်နိုင်တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ နဲ့ ဒီလိုဖြစ်တာပါ။ အမှန်တော့ သေဆုံးတာတွေ ဒဏ်ရာရတာတွေက တစ်ကယ့် တစ်ကယ်ကြတော့ လည်း တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ စာရင် ပမာဏအားဖြင့် အင်မတန်မှ နည်းပါတယ်။ အင်မတန်မှ နည်းပါတယ်။ သေဆုံးတာ ဆိုရင်လည်း ရာဂဏန်း တောင်မရှိ ပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ ဆိုတာလည်း တစ်ရာ တစ်ရာပတ်ဝန်းကျင် လောက်ပဲ ရှိတယ်။ သို့သော်လည်း အိမ်တွေကို တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် မီးရှို့ကြတဲ့ အတွက်ကြောင့် အိမ်ပေါင်း ငါးထောင်နီးပါးလောက် မီးလောင်သွား တယ်။ ငါးထောင်နီးပါး လောက် မီးလောင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီအိမ်တွေမှာ နေနေကြတဲ့ ဒီဘက်ကလည်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ ဟိုဘက်ကလည်း ဘင်္ဂလီတွေ ဆိုကြပါစို့လေ။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ တွေက ဘယ်လောက် တောင် ရှိလဲ ဆိုတော့ ဒီကနေ့ ခြောက်သောင်း လောက်ရှိတယ်။ ခြောက်သောင်း လောက်ရှိတဲ့ အတွက် ကျနော်တို့က အခု နှစ်ဘက်ပေါ့ တစ်ဘက်က လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ဟိုဘက်ကလည်း ဘင်္ဂါလီ ဒုက္ခသည်တွေ အခုဆိုရင် စခန်း (၅၃) ခု ဖွင့်ပြီးတော့မှ ကူညီတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ကယ်ဆယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ နောက်တစ်ခါ ပြန်လည် ထူထောင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ကျနော်တို့ က ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ UN အေဂျင်စီက အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ လည်း ကျနော်တို့ ပေါင်းပြီး လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ NGO တွေ INGO တွေ ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ပေါင်းပြီးတော့မှ တစ် အချက်က စားဖို့အတွက် ဒါတွေကို အားသွန် ခွန်စိုက် လုပ်ပေးနေပါတယ်။ နှစ် အချက်ကတော့ ယာယီနေနိုင်ဖို့အတွက် ယာယီနေနိုင်ဖို့ ဆိုတာလဲ တဲထိုးပေးရတာပဲ။ တဲတွေ ဘာတွေကလည်း ကျနော်တို့မှာ လုံလုံလောက် လောက်မရှိတော့ ဒီ UN အဖွဲ့အစည်းတွေက ကူညီတာတို့ ဘာတို့ ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ အများကြီး အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒေသဟာ မိုးသိပ်များတဲ့ဒေသတွေ ဖြစ်တယ်။ မိုးသိပ်များတဲ့ ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ နေနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီShelters တွေ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် သူတု့ိတွေ နေဖို့ပြုဖို့အတွက် ဒါတွေဆောက်ပေး ဘာပေးနဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးကို ကျနော်တို့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ လူမျိုးရေးအရ ကျနော်တို့ ဖိနှိပ်တာတွေလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကနေ့ သူတို့ စွပ်စွဲနေသလို လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်တာတို့ ဘာတို့ ဒါတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကြားရတော့ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်တွေထဲမှာလဲ ကျနော်တို့ ပုံတွေ တွေ့ပါတယ်။ အလောင်းတွေဆိုရင် တစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး ဒါတွေဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတွေကို သက်သက် လုပ်ကြံပြီးတော့ ချဲ့ကားပြီးတော့ လုပ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ဒီမှာဖြစ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲတော့ တစ်ဖက်ကလည်း မူဆလင် နိုင်ငံက အကြီးအကဲတွေပေါ့ ဟိုတစ်လောက ဆိုရင် တူရကီနိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမျိုးသမီးလဲ ပါလာတယ်။ အင်အားကလည်း လေးငါးခြောက်ဆယ် ခုနှစ်ဆယ်လောက် ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ ကျနော်နဲ့လည်း တွေ့တယ် ကျနော်ကလည်း ဒီ ကိစ္စတွေကို ရှင်းပြီးတော့ ပြတယ်။ ပြပြီးတော့ On Ground ကိုလဲ သူတို့ကြည့်ချင်တဲ့အတွက် ပို့ပေးပါတယ်။ ပို့ပေးပြီးတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် သွားပြီးတော့ ကူညီ ကယ်ဆယ်တဲ့ ပစ္စည်း ဘာတွေ ဒါတွေလဲ နှစ်ဖက် မျှမျှတတပါပဲ။ တစ်ဖက်ကလည်း ခုနလို ဘင်္ဂလီ ဒုက္ခ သည်တွေ ကို သွားပြီး တွေ့သလို တစ်ဖက်လည်း ရခိုင် ဒုက္ခသည်တွေကို သူတို့ တွေ့တယ်။ ပြီးတော့ ဟိုဘက်က မူဆလင် ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေ၊ ဒီဘက်က ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေ သွားတဲ့လူ ကိုယ်တိုင်က မူဆလင် ဘာသာဝင် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ လေးလေးစားစား တွေ့တာပြုတာ တို့ ဒါမျိုးတွေ တွေ့ပေးတာတို့ ကျနော်တို့ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပါပဲ အင်ဒိုနီးရှား ကနေပြီးတော့ အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီအသင်းနဲ့ လခြမ်းနီအသင်း ဥက္ကဌ မစ္စတာကာလာ ဆိုတာ ဟိုတုန်းက ဒု သမ္မတ ပါပဲ။ ဟိုတုန်းကတည်းက ဒုသမ္မတကတည်းက ကျနော် အင်ဒိုနီးရှား သွားလည်ပတ် ရင်းနဲ့ Call တွေ ဘာတွေ တွေ့ဖူးတော့ ကျနော်နဲ့ ရင်းနှီးနေပါတယ်။ သူလာတဲ့ အတွက် ကြောင့် ကျနော် ဝမ်းသာသွားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လု့ိ သူ့လဲရှင်းပြတယ်။ သူသွားချင်တယ် ဆိုလို့လည်း မိုးထဲလေထဲမှာ ကျနော် လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ လွှတ်ပေးလိုက်တော့ သူတို့လည်း အကူအညီတွေ ဘာတွေ ဆက်ပြုပြီးတော့ ပေးဖို့အတွက် ဒီလိုတွေ ကျနော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ခုနကလို တစ်ဖက်က လုပ်ကြံ စွပ်စွဲနေတာတွေ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သက်သေ သာဓကနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာ အောင်ပေ့ါလေ လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်။
မေး။ ။ သူတို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ပေးဖို့ စုံစမ်းမူတွေ လုပ်ပေးဖို့ ဆိုတာရော ဖြစ်လာနိုင်မလား ခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ နောက်ဆက်ပြီးတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီမှာ Press Conferenceလေး တစ်ခုလည်း လုပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေ ဒါတွေ ကျနော်တို့ အကုန်ဖိတ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေ NGOတွေ ပြီးရင် အဲ့ဒီ့မှာ တိုက်ဆိုင်မူလို့ ပြောရပါ့မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ လုပ်နေတဲ့ မစ္စတာကင်တာနား ကလည်း ရောက်နေတယ်။ ရောက်နေတော့ သူ့လည်း ကျနော်တို့ဖိတ်လိုက်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် တက်တယ်။ နောက်နေ့မှာ On Ground ကို ပြတယ်။ တစ်ခုကတော့ ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်တဲ့ ကိစ္စလေး တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုလည်း ကူးစက်သွားတာလဲ မရှိဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ရန်ကုန်မှာလဲ မူဆလင်တွေ နေတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်။ ဟိန္ဒူ တွေလဲရှိတယ်။ တခြားမြို့ကြီးတွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ဘာမှ ဒီနေရာတွေမှာ ဖြစ်တာပြုတာ မရှိပဲနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒီကွက်ကွက်လေး တစ်ခုမှာပဲဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဒါ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စ သက်သက်ပဲ ဖြစ်တယ်။ အခုလည်း ကျနော် တို့ နိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ လုံခြုံရေးအရလဲ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီ၊ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့လည်း တောက်လျောက် ကျနော်တို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာလဲ လွတ်လပ်တဲ့ လူအခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့ထားတာ ရှိပါတယ်။ လူအခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကိုလည်း ကျနော်တို့က ဒါလေးကို စစ်ဆေးပေးပါ ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြည်ပကနေပြီးတော့ ဒါကို အင်တာနေရှင်နယ် အစ်ရှုး (Issue) တစ်ခုလို ဒီမှာလာပြီး စစ်မယ်ပြုမယ် ဆိုရင်တော့ အမှန်တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီဟာက ကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာ ကိုယ်ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စ လည်းဖြစ်တယ်။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေလဲ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်ပအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ပြီးတော့မှ ဒီလို စစ်မယ်ပြုမယ် ဆိုတာတော့ ဒါတော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စ လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ မလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
မေး။ ။စောစောက သမ္မတကြီး ပြောသလိုပဲ ဒါဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း မဟုတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် ဒေသထဲမှာ နေနေကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုကြားမှာ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက် ရေရှည်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ မုန်းတီးမူဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့လဲ ငြင်းလို့မရတဲ့ ကိစ္စ ပါ။ အဲ့လို မုန်းတီးမူတွေကို ဒီထက်ပိုပြီး ပြန့်ပွားမလာအောင် သူတို့ နှစ်ဖက် အတူယှဉ်တွဲပြီး နေနိုင်အောင် သမ္မတကြီးတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုစီမံချက်တွေ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမူတွေလုပ်သွားဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မှန်ပါတယ်။ ကိစ္စ က ခုနကလို ရေရှည်လုပ်သွားရမယ့် ကိစ္စ ပါပဲ။ အခုချိန်မှာ တန်းရှင်း Tension က အတော်လေး မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာ Cool Down ဖြစ်အောင် တစ်ဖက်ကလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပါတီက ပါတီ အကြီးအကဲတွေနဲ့လည်း ကျနော်တို့ တွေ့ပါတယ်။ တွေ့ပြီးတော့မှ ဒီကနေ့ကမ္ဘာကြီးကလည်း ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီ ရွာကြီးတစ်ရွာလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့က သူ့လူမျိုး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ ခွဲခြားလို့မရဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ကျနော်တို့ ခုနကလို မထိခိုက်အောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ကျနော်တို့က စကားဆယ်ခွန်း တစ်ဆယ့်ငါးခွန်း ပြောတာနဲ့ ခင်ဗျားတို့က တစ်ခွန်းပြောတာ ပိုပြီးတော့ ထိရောက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကလည်း ဒါလေးကိုဝင်ပြီး ခုနကလို သဘောထားတွေ စိတ်ထားတွေ ဒါအမြင်မှန်ရလာအောင် ပြောင်းလဲလာအောင် လုပ်ပေးပါဆိုပြီး တော့ အချိန်ယူပြီးတော့ ပြောင်းရမယ့် သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ငြင်းလို့ မရအောင် တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ပြသနာမဖြစ်အောင် ဥပဒေနဲ့ ကျနော်တို့က ကိုင်တွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ၁၉၈၂ခုနှစ် ဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်။ ၁၉၈၂ခုနှစ် ဥပဒေဆိုကလည်း ဒီမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အကာအကွယ်ပေးထားတာ တွေရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖျဉ်း ကျနော်သိရသလောက် ဆိုရင် ၄၈ခုနှစ်မတိုင်ခင်က ဒါ ဟိုတုန်းကတော့ လယ်လုပ်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ခေါ်ပြုလာကြတာပဲ။ ခေါ်လာရင်းနဲ့ မပြန်ပဲ ဒီမှာသောင်တင်ပြီးတော့ နေကြတာပေါ့။ ၄၈ခုနှစ် မတိုင်ခင်ကနေပြီးတော့ ရောက်လာတဲ့ မိဘတွေကမွေးဖွားတဲ့ Third Generation က မြေးတို့ဘာတို့ ရောက်လာတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့ အခုနကလို အသိအမှတ်ပြု ပေးဖို့ဆိုတဲ့ ဥပဒေထဲမှာ ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ အသုံးချပြီးတော့ အနာဂတ်မှာ လူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ခုနကလို သင့်သင့် တင့်တင့်ဖြစ်အောင် နောက်တစ်ခုကလည်း လူသားတွေဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးရှိလာအောင် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ခုနကလို ရှေ့တန်းကနေ ဦးစားပေးပြီး စဉ်းစားတတ်လာအောင် ဒါတွေက ကျနော်တို့ အချိန်ယူပြီးတော့ လုပ်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ ပညာရေးက အရေးကြီးတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ စာသင်ကျောင်းတို့ဘာတို့ ထိထိရောက်ရောက်မရှိဘူး။ များသောအားဖြင့် ဘာသာရေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ သင်တဲ့ကျောင်းတွေပဲရှိတယ်။ အဲ့တော့ အခြေခံကတော့ ပညာရေးပါပဲ။ ပညာရေးကို ကျနော်တို့ ထိထိရောက်ရောက် နဲ့ ခေတ်မှီတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ကျနော်တို့က ထူထောင်ပေးမယ်။ ပညာတတ်တယ်ဆိုရင် အတွေးအခေါ်ရှိလာမယ်။ မှားတယ်မှန်တယ် ဆိုတာကို သူတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တတ်လာမယ်။ ဟိုမှာ တိုးလာတဲ့ လူတွေထက် လက်ရှိလူက ပေါက်ဖွားတဲ့ နူန်းက ပိုများပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးတုန်းကရှိနေတဲ့ သူတွေက ပေါက်ဖွားမူတွေ သိပ်များတယ် ။ အိမ်ထောင်စုတစ်စု ဆိုရင် တချို့ဆို ခုနှစ်ဆယ်၊ ရှစ်ဆယ်လောက်ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ဒီပေါက်ဖွားလာတဲ့ တိုးပွားလာတဲ့ အင်မတန်ကို ဆင်းရဲနေတဲ့ လူစုလူဝေးအတွက်ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးတွေ လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကို ရန်ပုံငွေတွေလိုတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အစောက ကျနော်ပြောခဲ့သလို ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံက နေပြီးတော့ ဒေါ်လာသန်းငါးဆယ် လှုမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးဟာ နိုင်ငံတော်အစိုးရဆီက နေပြီးတော့ တဆင့် အဲဒီလိုဒေသတွင်းမှာသွားပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ ဖြစ်လာရင်တော့ ကောင်းမှာပေါ့ ဒါ သမ္မတ ကြီးတို့လည်း ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ ဒီနိုင်ငံတကာမှာ ဒီ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဆိုပြီးတော့ ဒီလူတွေအတွက် အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို တဆင့် ထောက်ပံ့ ပေးတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ရောက်သွားမှာရော သမ္မတကြီးတို့အနေနဲ့ မစိုးရိမ်ဘူးလား။
ဖြေ။ ။ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့ လာသမျှတွေကိုပြောနေတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကူညီမယ်ပြုမယ် ဆိုရင်တော့ နှစ်ဘက်မျှမျှတတနဲ့ ကူညီပါ လက်တွေ့ ခုနကလို ဒုက္ခ ခံစားနေတဲ့သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ခင်ဗျားတို့ ကူညီပေးတဲ့ ဟာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ဒီလူတွေလက်ထဲ ကိုရောက်သွားအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့က သူတို့နဲ့တွေ့တိုင်း၊ တွေ့တိုင်း ဒီ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ မသက်ဆိုင်တဲ့ သူတွေဆီကို ရောက်သွားမှာလည်း ကျနော်တို့ စိုးရိမ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အဲ့ဒီ့ဒေသတွင်းက အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ တင်ပြမှုနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့တင်ပြမှုတွေမှာ တော်တော်များများ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေက အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် အမျိုးသားရေး အခြေအနေကို အကြောင်းပြုပြီး တော်တော်လေး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖော်ပြတာရှိတယ်။ ပြည်ပမီဒီယာတွေကတော့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်းပဲ လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုပြီးတော့ ဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို တောင်မှပဲ တစ်ဖက်က ကျူးကျော်လာတဲ့ သူတွေကို မြှောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး စွပ်စွဲခံရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ရော သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပြင်ပမီဒီယာတွေ ပြောကြားမူကို တစ်စုံတရာများ စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်ရတာတွေ ရှိခဲ့လားခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့က စိုးရိမ်ရတယ်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီးမှ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဒီလောက်ထိ ကိုယ့်နိုင်ငံပေါ်မှာ ကူးစက်လာမှာတို့ ဘာတို့ တော်တော်လေး ကျနော်တို့က စိုးရိမ်မိပါတယ်။ တစ်ချို့ သတင်းတွေဟာ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီးတော့မှ တစ်ဖက်က ခုနလို မူဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေကို နှိုးဆွပေးတဲ့ သတင်းတွေ အင်တာနက် သတင်းတွေလည်း ကျွန်တော်တို့ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ကျနော်တို့မှာ အတော်လေး စိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် ပြည်ပမှာနေနေတဲ့ ကျနော်တို့သံရုံးတွေပေါ့။ သံရုံးတွေထဲက အီဂျစ်မှာ ရှိနေတဲ့ သံရုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဆန္ဒပြတာတို့ဘာတို့လုပ်ပါတယ်။ သာမာန် ဆန္ဒ ပြတာတော့ လူ့အခွင့်အရေးပါပဲ ပြသာနာမရှိပါဘူး သို့သော်လဲ သံရုံးထဲဝင်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်အလံတွေ ဘာတွေဖြုတ်ချ ဘာညာ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ အဲ့မှာရှိတဲ့ မိသားစုတွေ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေအတွက် စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အင်ဒိုနီးရှားမှာလဲ အလားတူပါပဲ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ သိအောင်ဆိုပြီး ကျနော်တို့အနေနဲ့ အကြီးအကဲတွေဆီ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စာရေးပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံကိုလဲ ကျနော်စာရေးပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်အမှန်က ဒီလို ဒီလိုဖြစ်တာပါ။ ဒါဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မဟုတ်ပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားက သမ္မတကလဲ ကျနော်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်တော့ ကျနော်စာရေးပါတယ်။ မလေးရှားက ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုလဲ ဒီအတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ဆီ အလည်အပတ်လာသွားတာ သိပ်ပြီးမကြာသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီပြသနာတွေကို ကျနော်တို့ ကြီးထွားပြီးတော့ မလာစေချင်ပါဘူး။ ပြဿနာအစတုန်းကတော့ လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ်နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် သို့သော်လဲ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက သူတို့သိလာပါတယ်။ ဒါတွေက လူသားချင်းအနေနဲ့မြင်ရမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော်တို့ ထိခိုက်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ သူတို့ရှိလာပါတယ်။ ဒီလိုအမြင် ပြောင်းတဲ့ တချိန်ထဲမှာပဲ ပြည်ပကအမြင်တွေကတော့ ကျနော်တို့နဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတယ်။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက်တော့ ကျနော်တို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက် နောက်ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ခုနကလို ကျနော်တို့ ဖိတ်ခေါ်တယ်။ ပြတယ်။ အခုဆိုရင်လဲ OIC တို့ဘာတို့က အတွင်းရေးမှူးလဲ ကျနော် ဖိတ်ထားပါတယ်။ လာပါ ခင်ဗျားတို့ လာကြည့်ပါ ကျနော်တို့ရှင်းလင်းပြ ပါမယ်။ On Ground လဲလိုက် ပြပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်မှာစိုးတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေလဲကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။
ဗွီအိုအေ မြန်မာဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို နေပြည်တော်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တပ်ကို လူတွေ သတိရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ
.. နှိုင်းကြည့်ဖတ်နိုင်အောင်ရယ်ပါပဲ..။ အမြင်ကျယ်ကြစေသတည်း..။
ဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွက်ချက်ပြီး အဆိုးဆုံးထဲမှ အကောင်းဆုံးရလာဒ်ရယူခြင်း
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက အရှေ့တီမောနိုင်ငံကို အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက်ပြီး သူ့လက်အောက်ခံနိုင်ငံလုပ်ထားရာကနေ
လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေပြုံကြွဖြစ်လာတာနှင့်၊ အရင်က အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကရပ်ပြီး ထောက်ခံခဲ့၊
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖျက်မှုတွေကို မသိကြိုးကျွန်ပြုခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေလျှအပါအဝင်
နိုင်ငံမျိုးတွေကပါအပါအဝင် တကမ္ဘာလုံးက အင်ဒိုနီးရှားကို ဖိအားပေး လာလို့ အရှေ့တီမောမှာ
ပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပြီး လွတ်လပ်ရေးယူမလား၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တွဲမလားဆိုတာကို လူထုက ဆုံး
ဖြတ်စေရပါတော့တယ်။ (မှတ်မှတ်ရရ – တကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းပြီး အင်ဒိုနီးရှားကို
ဖိအားပေးထုထောင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန် တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက ညီအကိုရင်းချာသကဲ့သို့သောမိတ်ဆွေ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို စာနာပါတယ်ဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဘက်မှာ ရပ်ခဲ့ပါတယ်)။
အရှေ့တီမောနိုင်ငံရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဖါလင်တေးလ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ အရင်နေရာယူလို့မရခဲ့တဲ့
မြို့တွေ၊ ရွာ တွေအနားမှာအထိ ယူအန်ကကြားဝင်ဆွေးနွေးပေးမှုနဲ့ ကန့်သတ်နေရာတွေမှာ
နေရာယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားက အဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာကလဲ စိတ်ထားစေတနာအမှန်နဲ့မဟုတ်ပဲ
သူဆင်ထားတဲ့နောက်အကွက်အတွက် အသင့်ပြင် ထားလိုက်တာပါ။
၁၉၉၉ခုနှစ် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ပြီးတော့ အရင်ကထဲကလွတ်လပ်ရေးပေးဘို့ စိတ်မကူးချင်တဲ့
အင်ဒိုနီးရှားက သူ့လက်ပါးစေ ပြည်သူ့စစ်တွေ၊ သူ့ရဲ့လက်မရွံ့တွေကို အသုံးပြုပြီး
အရှေ့တီမောလူမျိုးအချင်းချင်းက အိမ်တွေမီးရှို့၊ လူတွေ မုဒိမ်းကျင့်၊
သတ်တာတွေလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖေါ်ပါတော့တယ်။ လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုတဲ့
အင်ဒိုနီးရှားရဲတွေနဲ့တပ်တွေကလဲ သူတို့ဆင်ထားတဲ့အကွက် ဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက်
လုံးဝဝင်ရောက်ကာကွယ်တားဆီး တာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ တဘက်လှဲ့
လက်နက်နဲ့အထောက်အပံ့တွေဆင်ပေးထားတဲ့ ပေါင်းစည်းရေးပြည်သူ့စစ် တွေ ဆီမှာ လက်နက်၊
သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံနဲ့ လူသတ်ပွဲတွေစခင်းကျင်းပါတော့တယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၉၈ရာနှုန်းက ခရစ်
ရှေ့တန်းကျတဲ့အခန်းကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့ ခရစ်ယှာန်ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းတွေကို ဖျက်ဆီး၊ လူတွေကို
ဘုရားကျောင်းတွေထဲထည့် မီးလောင်တိုက်သွင်းတာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ခရစ်ယှာန် သီလရှင်တွေကော၊
ခရစ်ယှာန်ဘုန်းတော်ကြီးတချို့ကိုလဲ ရက်ရက်စက်စက် ဆွဲချသတ်တာတွေလဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေလဲ
အများကြီးသေကြ၊ လူနေအိမ်ခြေတွေလဲ ဖျက်ဆီးခံရနဲ့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံတခုလုံးပြာပုံနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အရှေ့တီမောနိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ဖါလန်တေးလ်အဖွဲ့အတွက်
အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်မှု နဲ့ သွေးတိုးစမ်းမှုကို ကြုံရတော့တာပါပဲ။
အရှေ့တီမောနိုင်ငံသားတွေအများစုကြီးက အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့လို့ ဒီနေရာရောက် လာတဲ့
လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့ဟာ သူတို့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာ သူတို့ပြည်သူတွေကို အခုလို ရက်ရက်စက်စက် သတ်
ဖြတ်နေတာ၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းနေတာတွေကို ဝင်ပြီး ရပ်အောင်လုပ်မလား၊ မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ
လူထု ထဲကအမျိုးအဆွေတွေပါနေတဲ့ ဖါလန်တေးအဖွဲ့သားတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ
အပြင်းအထန်အငြင်းအခုန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူထုတွေက ကိုယ့်လူထုတွေဖြစ်တယ်။ ဒီအဖွဲ့အတွက်
စားနပ်ရိက္ခာကအစ၊ ဖွက်ထားပေးတာအဆုံး ဒီလူထုက ဝိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ ကြပြီးတော့ လူထုကို ကာကွယ်ဘို့ကြတော့
လက်နက်တွေကိုင်ထားပြီး လူထုဘေးနားမှာရှိတဲ့စခန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ ဖါလန်တေး အဖွဲ့က
ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီး မေးကြ၊ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတာတွေ တပြုံကြီးပါ။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ဖါလန်တေးဟာသူတို့အမျိုးအနွယ်လူထုထိရင် ရပ်နေလို့မရပဲ ဝင်ပါလာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆို
အရှေ့တီမော မှာ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပူးပေါင်းရေးကို လိုလားတဲ့ လူနဲစု အင်ဒိုနီးရှားလက်ပါးစေတွေနဲ့
လူထုဘက်က ရပ်တည်တဲ့ ဖါလန်တေးလ်တို့တိုက်ကြရတော့မယ်။ အဲ့ဒီလိုတိုက်ရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
အင်ဒိုနီးရှားလက်ပါးစေတွေရှုံးမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အရှေ့တီမောနိုင်ငံသား
အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ အပြန်အလှန်လုပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင် အင်ဒိုနီးရှားက အရှေ့တီမောမှာ
လူသားတွေကို ဘေးရန် တွေက ကာကွယ်ပေးဘို့ ဝင်ထိမ်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ပြန်ပြီးသိမ်းယူမယ်လို့
စီစဉ်ထားတာပါ။ အင်ဒိုနီးရှားက ထပ်သိမ်းယူပြီးရင်လဲ
ဒါကို ကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့ ဇနာနာနဲ့ ဖါလန်တေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကိုယ့်လူထုတွေ မတရားရက်ရက်စက်စက်
အိမ် တွေမီးရှို့၊ နှိပ်စက်ညှည်းပန်း၊ သတ်ဖြတ်ခံနေရတာတွေကို ဖါလန်တေးအဖွဲ့အနေနဲ့ ဝင်ရောက် ပြီး
ဟန့်တားရင်း အင်ဒိုနီး ရှားလက်ပါးစေ ပြည်သူ့စစ်တွေနဲ့စစ်ဖြစ်တာမျိုး မဖြစ်စေဘို့၊
ဖါလန်တေးအဖွဲ့တွေကို ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်ရ အမိန့် တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်ထုတ်ထားပါတယ်။
သူတို့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးထားတာတခုကတော့ လက်လှမ်းမှီရာလူနေဒေသတွေကို ဖါလန်တေးတပ် တွေက
မသိမသာချဉ်းကပ်ပြီး လူတွေကို ဘေးက ကာရံပေးပြီး သူတို့တပ်စခန်းရှိရာမှာ ကယ်ဆယ်ပေးထားဘို့
ပဲပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလက်ပါးစေ ပြည်သူ့စစ်တွေကို ပြစ်တာခတ်တာ၊ ခုခံပြီးတောင်
ပြစ်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ အမိန့် ပေးထားပါတယ်။ ဇနာနာနဲ့ ဖါလန်တေးလ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ
ဒီလိုအမိန့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲပေးရတာပါ။ အောက်ခြေရဲ ဘော်တွေက အပေါ်က ဘာဗျူဟာနဲ့
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်တော့ အပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာ တော်တော်လေး
မကျေမနပ်တွေဖြစ်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇနာနာ ဦး ဆောင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကတော့ သူတို့တပ်သားတွေ
လက်ရှိအခြေအနေပဲမြင်ပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတာကို ရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီး ဒီအမိန့်အတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်ပါဆိုပြီး
ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ နောက်ပြီး အောက်ခြေတပ်သားတွေ၊ လူထုတွေကို သူတို့ ဘာလို့
ဒီလိုရပ်တည်ဘို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာကို နားလည်စေဘို့ ရှင်းလင်းပြတာတွေလုပ်ရပါတော့တယ်။
တနိုင်ငံလုံးပြာကျလုနီးပါးအထိကို ဖျက်စီးခံခဲ့ရပါတယ်။ လူထောင်ကျော်ကိုလဲ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တာခံခဲ့ရပါတယ်။
တောင်တန်းတွေနဲ့ ဖါလန်တေးရှိတဲ့ဒေသတွေကို တိမ်းရှောင်တဲ့သူတွေပဲ အသက်ရှင်ကြရတယ်။
ဒီလိုလူထုမှာနစ်နာခဲ့ရပေမဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကြံစည်ထားတဲ့ အရှေ့တီမောကို သူတို့အချင်းချင်း
လူမျိုးရေးပဓိပက္ခ ဖန်တီးပြီး ပြန်သိမ်းစည်းမဲ့ မဟာအကြံအစည်ကြီးကတော့ ပျက်စီးခဲ့ရတာဟာ
ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူ ထုတွေဆုံးရှုံးရတယ်၊ ပက်ပက်စက်စက်ယုတ်ယုတ်ပတ်ပတ်သတ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရတယ်၊
အိမ်တွေယာတွေမွေးမြူရေးနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး တွေ၊ စက်ရုံတွေအားလုံးပျက်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒါပေမဲ့
သူတို့တန်ဘိုးထားတဲ့ လွတ်မြောက်ရေးကိုတော့ လတ်တလော ခံစားချက်ကို ဥိးစားမပေးပဲ
သင်ခန်းစာယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြဘို့ပါ။ အရှုံးထဲက အကောင်းဆုံးရလာဒ်ကို
အရှေ့တီမောလှုပ်ရှားမှုမှာ ဘယ်လို ရ ယူသွားသလဲဆိုတာပါ။ တကယ်လို့သာ သူတို့အဲ့ဒီအချိန်က
သူတို့လူမျိုးတွေကို သတ်ဖြတ်နေတာ လက်စားချေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ဝင်ခဲ့ရင် အဆများစွာအင်အားကြီးမားတဲ့
အင်ဒိုနီးရှားတပ်ကြီးကို ပြန်ထပ်ရင်ဆိုင်ပြီး လွတ်လပ်ရေးပြန်ရအောင် လုပ်ဘိုက မလွယ်တော့ပါဘူး။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလဲ သူတို့လက်ခံထားတဲ့ ဆန္ဒခံယူပွဲပြီးတော့ အချင်းချင်းတွေသတ်ဖြတ် ကြတာလုပ်ကြလို့
ရခိုင်မှာတော့ အခြေအနေခြင်း သိပ်မဆင်တူဘူးဗျ၊ ဟိုက မတူညီတဲ့ တရားဝင်နေထိုင်သူ လူမျိုးစုအကြီးနဲ့ အသေးနှစ်ခုဆော်ကြတာ။ ဒီမှာက ဥပဒေပိုင်းအရ ထောက်ပြလို့ရပြီး မတူညီတဲ့ အသေးနှစ်ခုအကြား ဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရက ရှောင်လင်သိုင်းဆော့လို့ ရတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ရှောင်လင်ဘုန်းကြီးကနေ အမဲရောင်သိုင်းသမား ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဂျမလဲဆိုတာ အဖြူရောင် သိုင်းလောကသားများ သိထားရမယ်။ အဖွင့်အပိတ် ခလုပ်များ အသုံးပြုတတ်ကြပါ…။
မေး – ဒေသတွင်းက အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ တင်ပြမှုနောက် ပြင်ပမီဒီယာတွေရဲ့ တင်ပြမှုတွေမှာ တော်တော်များများ ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် အခြေအနေကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ တော်တော်လေး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖော်ပြတာရှိတယ်။ ပြည်ပမီဒီယာတွေကတော့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ အတိုင်းပဲ လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေပြုပြီးတော့ ဖော်ပြကြတယ်ဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို တောင်မှပဲ တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ ဒါဟာ ကျူးကျော်လာတဲ့ သူတွေကို မြှောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးစွပ်စွဲခံရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ပြီးတော့ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပြင်ပမီဒီယာတွေရဲ့ ပြောကြားမှုကို တစ်စုံတစ်ရာများ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာ တွေရှိသလား။
SHAME ON YOU, Than Lwin Tun.
You (VOA/RFA) are partly responsible for the escalation of hatred to Buddhist by Muslims now around the world. Go back and check your news starting the violence and check if you really cover only for Human Rights or cover for Rohingya.
This is justasmall part of info from your news covering info from Maung Kyaw Nu of the Burmese Rohingya Association of Thailand.
Now you go and ask Patrick Ventrell who is part of your Govt responsible spokeman whether that Genocide in Myanmar of those Rohingya?? You people put those kind of one-sided stories/propagandas from Rohingya on your news and spread the world. What are you people going to say about that??? FUCK YOU Than Lwin Tun and SHAME ON YOU people. You were born in Myanmar but the beggers by promoting false news on your medias. Don’t be so proud that our Govt had to see you… Our poor Govt had to see you just to clean up those messes of info you guys made which in turn made the muslims hate Buddhist all around the world now. SO, again, FUCK YOU.
” ဟိုမှာ တိုးလာတဲ့ လူတွေထက် လက်ရှိလူက ပေါက်ဖွားတဲ့ နူန်းက ပိုများပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ
နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဟိုးတုန်းကရှိနေတဲ့ သူတွေက ပေါက်ဖွားမူတွေ သိပ်များတယ် ”
” ပြဿနာအစတုန်းကတော့ လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ၊
သို့သော်လဲ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက သူတို့သိလာပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးကို ကျွန်တော်တို့ ထိခိုက်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ သူတို့ရှိလာပါတယ် ”
” လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ”
Pro အဆင့်မရောက်သေးပဲ emotion နှင့် သတင်းရေးကြတဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ ။
သမ္မတကြီးနှင့် အမေစု သာ အမြင်မကျယ်ရင် ၊
လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး စစ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ် ။
ဟဲဟဲ ၊ သူကြီးက အဘ ကို Best Comment တောင်ပေးလိုက်သေး ။
အမှန်က အဘက ဒီ Comment အတွက် ၊
သူကြီး စိတ်ဆိုးမှာတောင် စိုးရိမ်နေတာ ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ၊
ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေကို နဲနဲ ပြောထားမိလို့ ။
သူကြီးရဲ့ MG လူမုန်းသွားမှာ စိုးလို့ ။
အဘ ကတော့ အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးပါတဲ့ အာဏာပိုင်ထဲကအသိဆီက ကြားထားပြီးသားမို့လို့ ၊
အခု သမ္မတကြီး ပြောတဲ့အခါ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး ။
လူမကြိုက်မှာသေချာနေပေမယ့် အမှန်ကို ပြောရဲလာတဲ့ ၊
သမ္မတကြီးရဲ့ သတ္တိကိုပဲ အားပေးပါတယ် ။
၁ ။ နောက်ထပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူတွေက မရှိသလောက် နည်းပါတယ် ။
၂ ။ ပြဿနာအစတုန်းကတော့ လူမျိုးရေး စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေက ရေးပါတယ် ။
ဒါတောင် မပြောသင့်တဲ့ အမှန် တွေ အများကြီး ကျန်နေသေး ။
အမှန်တရားဆိုတာ ကြာကြာ ဖုံးဖိလို့မရပဲ ပေါ်လာမှာပါ ။
အခုတောင် အစိုးရ စကားပြန် လိမ်ပြီး ဘာသာပြန်တဲ့အကြောင်းက ၊
နိုင်ငံတကာမှာ ပွထပြီး ၊ မြန်မာ အစိုးရ အရှက်ကောင်းကောင်း ကွဲနေပြီ ။
အဓိက ကတော့ အဲသဟာပါပဲ။ အားနာခြင်း ကြောက်ရွှံ့ခြင်းတွေကြောင့် Turkish တွေ အတွက် စကားပြန်ဟာ စကားကိုတည့်တည့် ဘာသာမပြန်ရဲဘဲ ဖေးဖေးမမ ပြောဆိုရင်းကနေ ညာသလိုဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဘာမှကြိုတင်မစဉ်းစားထားကြဘူး။ သူတို့ထင်တာ အဲဒီလိုတည့်တိုး မပြောလောက်ဘူး မငိုပြလောက်ဘူးလို့ ထင်ထားမှာပေါ့။ တကယ်တမ်း အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် အမြဲ်ရန်စနေတာ သူတို့လေ။ အဲဒီတော့ ဒီလိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ အဖိနှိပ်ခံရ ပါတယ်“ ဆိုတာမျိုး ပြောမယ် ဘယ်ထင်လိမ့်မတုံး။ ဒါပေမဲ့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး ညာမိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့တောင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်း ဖြစ်အောင်တောင် အင်တာနက်ပေါ်မှာ ညာနေကြတာပဲ။ မြန်မာအစိုးရကတော့ ရိုဟင်ဂျာရဲ့လှည့်စားခြင်း ကိုကောင်းကောင်းခံနေရပြီ။ သမ္မတကြီးကလည်း အစကတော့ ကုလဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြးီ
ကိုတောင် ရိုဟင်ဂျာကို် refugee အဖြစ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို လက်ခံခိုင်းဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ အခုကြတော့ လေသံကပျော့သွားပြန်ပြီ။ ကျွန်တော် ထင်တာတော့ ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး တင်ပြတဲ့ မသမာတဲ့နည်းလမ်းနဲ့နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးလက်မှတ် ကိုဆောင်ခြင်း
ကို အထူးစီမံချက် တစ်ရပ်ချမှတ်ဖော်ထုတ် ရန် ဆိုတဲ့ အဆိုဟာ တနွယ်ငင် တစဉ်ပါ
ဖြစ်မှာဆိုးတာနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိုပဲသူတို့လက်ခံမဲ့သဘောလားမသိ။ ကျွန်တော်တို့ကို အခုဖိအား ပေးနေတဲ့ မူဆလင်နိုင်ငံတွေဟာ terrorist/extrimists အများဆုံးထွက်တဲ့/ထောက်ပံ့ နေတဲ့နိုင်ငံတွေပါပဲ Pakistan, Indonesia, Iran & Saudi Arabia ect.. အစိုးရပိုင်းမှာတောင် အများကြီး စိမ့်ဝင်နေပြီး အစိုးရကပြန်ကြောက်
နေရတဲ့နိုင်ငံတွေ။ ခရစ်ယာန်တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ မျက်နှာသာ အပေးမခံရတဲ့နိုင်ငံတွေပါ။ ကိုယ်တွေက မေတ္တာလိုလို သစ္စာလိုလို သွားလုပ်လို့ မရဘူး။ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်နိုင်မှရမယ်။ပျော့လို့ကတော့ အနင်းခံရပြီသာမှတ်။ သူတို့က ချမ်းသာတဲ့အပိုင်းက လူတွေက အပျော့ဆွဲ ဆွဲပြီး/ပိုက်ဆံနဲ့ ဝင်မယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းက အကြမ်းနည်းနဲ့ဝင်မယ်။ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေလိုပေါ့ဗျာ ချမ်းသာတဲ့လူတွေက လူကုံထံ အစိုးရ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူကြီးလူကောင်းအဖြစ်ဝင်နေမယ်။ မင်းသားခေါင်းဆောင်းနဲ့ပေါ့။
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေ/foot soliders တွေက အရှေ့က အကြမ်းတို်က်ပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုသူတို့ သနားပြီး ကူညီတယ်ဆိုတာ ဒီလိုတစ်ခြားဘာသာဝင်တွေ များတဲ့နိုင်ငံမှာ ထကြွ သောင်းကျန်းနိုင်တာတွေ့လို့ တဖက်လှည့်နဲ့ မြှောက်ပေးဖို့လုပ်နေတာ။ သူတို့သိပါတယ်ဗျာ သတင်းတွေက အမှားတွေဆိုတာ။ တစ်ခြားနိုင်ငံကြီးတွေက
ဒီကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး သိပ်မှ မလှုပ်ကြတာ။ အဲဒါကို မသိသလိုနဲ့ပုံကြီးချဲ့နေကြတာ။ တမင်သက်သက် နိုင်ငံထဲ ဝင်ခွင့်ရအောင်လို့။ India & Philippine မှာ အဲဒီ OIC အဖွဲ့ကို
ဝင်ခွင့် ပိတ်ထားတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်။ အခုပဲကြည့် စတာနဲ့ ဆော်ဒီက သန်း၅ဝ ထုတ်ပေးမယ်လုပ်နေတယ်။ လူကြားကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ ဘောင်ထဲကနေ စပြီးလာဘ်ထိုးတဲ့နည်းပါ။ သူတို့သိတယ်လေ အရင်အစိုးရလက်ထက် ကတည်းက လာဘ်ထိုးလို့ရနေတာ။ အခုဟာက တရားမဝင် လာဘ်ထိုးတာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ ငွေထုပ် ပြရင်တော့ ဒီကောင်တွေကို လိုသလို ကစားလို့ရတယ်လို့ သူတို့ကထင်နေတာ။ မြန်မာပြည်သူလူထုလောက်က သူတို့က သောက်ဂရုတောင်
မစိုက်။ မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရနဲ့ ပြီးရင် အားလုံးပြီးတယ်ဆိုတာ သိနေတာပဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေတ္တာနဲ့ သူတို့ကိုပေးဝင်တယ် လိုု့ ဒီလူတွေ မတွေးဘူး။ Indonesia & Malaysia ဝန်ကြီးချုပ် အဟောင်းတွေကလည်း အကောင်းပြော သလိုလိုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံဖို့ သွယ်ဝိုက် အမိန့်ပေးနေတယ်။ သူတို့ မြန်မာပြည် အပေါ်မှာ သဘောထားမှန်တယ်ဆို အရင်ကတည်းက တစ်ခြားနိုင်ငံတွေ လှူနေတဲ့ အချိန်မှာ လှူပါလား။ အနဲဆုံး သန်း၅ဝ မဟုတ်တောင် ၁သိန်းလောက်ပေါ့ဗျာ။ ဟို ဝန်ကြီးချုပ်ကတော် ဆိုတာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေ ငိုပြတော့ တစ်မျိုး မျက်နှာက
ရခိုင်တွေ အတွက်လှူတဲ့နေရာမှာတော့ မျက်နှာက ပြုံးသာပြုံးနေတယ်၊ မျက်လုံးက တကယ် sincere ဖြစ်တဲ့ အရိပ်အယောင်တောင်မတွေ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကုလမင်းကြီးက အစ ဒီဝန်ကြီးကတော် အဆုံး တစ်ယောက်မှ ဒေသခံတွေ အတွက်ပါ
စဉ်းစားပေးပြီး လာတဲ့လူတစ်ယောက်မှ မပါဘူး။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို genocide တို့ racists တို့ လို့စွပ်စွဲတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းက သူတို့ကမှ အဲသလိုဟာတွေ။ ဒီနိုင်ငံ်တွေက Asian မူဆလင် ကလွဲလို့ တစ်ခြား southeast Asian တွေဆိုရင်
သူတို့ထက်နိမ့်ကျတဲ့သူတို့ထင်တယ်။ ဖီလစ်ပိုင် သီရိလင်္ကာ မြန်မာ ယိုးဒယား တွေ က သူတို့ဆီမှာ အလုပ်ကြမ်းသမား အိမ်ဖော် လုပ်နေကြရတာကိုး။ ဖီလစ်ပိုင် အိမ်ဖော်တွေ သီရိလင်္ကာ အိမ်ဖော်တွေ ဆို ခဏခဏ ဆော်ဒီမှာ ညှင်းပမ်း နှိပ်စက် အသတ်ခံရတယ်။ မနှစ်တနှစ်ကထင်တယ် သီရိလင်္ကာ က အိမ်ဖော်မိန်းမ တစ်ယောက်ကို
ဆော်ဒီမိသားစု တစ်စုက သူတို့စကားနားမလည်လို့ ဘုရားဆီမှာ အပြစ်ဒဏ်ခံပြီး ကုတယ်ဆိုလား မသိဘူး
သံချောင်းတွေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရိုက်သွင်းပြီး နှိပ်စက်ထားတာ၊ နေမကောင်းတော့မှ သူ့ကိုပြန်ဖို့လွှတ်လိုက်တယ်။ လေယာဉ်ကွင်းက metal detector ကိုဘယ်လို ဖြတ်လာလည်းတော့ မသိဘူး၊ သူ့နိုင်ငံပြန်ရောက်တော့ နေမကောင်းတာကို သွားပြရင်း x-ray ရိုက်တော့မှ ပေါ်လာတယ်၊ သံချောင်း ၂၆ ချောင်းဆိုလား။
အာဖဂ္ဂန်မှာ လည်း တာလီဘန်တွေက Asian descent ရှိတဲ့လူတွေဆို မူဆလင် ဖြစ်ဖြစ ဘာဖြစ်ဖြစ် နားမလည်ဘူး လိုက်သတ်လို့
Refugee အဖြစ်နဲ့ ဩစတြေးလျတို့ အမေရိကားတို့ကို ပြေးရတယ်ဆိုပဲ။
အခုဟာက တစ်ကယ့်ကို လူမျို ဘာသာမျို လုပ်ငန်းကြီး စပါတော့မယ်။
သူတို့ အဖွဲ့ အစည်းကြီးတွေဝင်လာမယ်။ ပိုက်ဆံအား လူအား အပြုံးမျက်နှာ လေးများနဲ့ ရခိုင်သူ/ရခိုင်သားလေးတွေက နေစပြီး အယုံသွင်း ကြင်နာဟန်ပြ
ပြီး ချော့မော့ ဘာသာပြောင်းခိုင်းမယ်။ လူပဲဗျာ ဘယ်ခံနိုင်မတုံး။ သာမာန်လူသား အတွေးနဲ့ တွေးကြည့် ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်လာတာ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာပြီ ငါတို့ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ခံနေခဲ့ရတာ။ ဒီ အသားဖြူဖြူ ပြုံးပြုံးနဲ့ လူတွေရောက်လာမှ ငါတို့ ချမ်းချမ်းသာသာ နေရတော့တယ်။ သူတို့ဘာသာဟာ တကယ်ကောင်းလို့ပဲဖြစ်မှာ ပဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တင် ဘာသာပြောင်းသွားနိုင်တယ်။ အဲ ရခိုင်တွေလို ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ သူတွေပါသွားပြီးရင် ကျွန်တော်ထင် သလောက်တော့ ကချင်နဲ့ မန္တလေးမြန်မာ တစ်ချို့ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြန်မာတွေက ပြောင်းလို့လွယ်သွားပြီ။ အဲတော်တော်များများပြောင်းသွားလို့ကတော့ သူတို့ရဲ့
သနား ကြင်နာတတ်တဲ့ မျက်နှာဖုံးကြီးဟာကွာကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ အခါကျမှ
ငါတို့ဘာသာရဲ့ ဥပဒေ(ရှာရီးယား ဥပဒေဆိုလား) လိုက်နာရမည်။ မလိုက်နာရင် သေဒဏ် ကြိမ်ဒဏ် ဆိုတာတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လူမျိုးစွဲ ဘာသာစွဲ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပါးသူတွေရဲ့ အစွန်းရောက် ဘာသာစွဲလမ်းမှုတွေကိုလည်း မကြိုက်ပါ။ ဒီလူတွေရဲ့target က ကျွန်တော်တို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေကို အရင်
အုပ်စီးမှုရအောင်လုပ်မယ်(အကြမ်းနည်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အနုနည်းနဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ်)။ ဒီနိုင်ငံတွေက ပိုလွယ်တယ်။ ပြီးတော့မှ နောက်ပိုင်း တခြားနိုင်ငံကြီးတွေကို အုပ်ရပိုလွယ်သွားတာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ တစ်ကယ် မှန်ကန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရလို့ ဩစတြေးလျလို အမေရိကားလို လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ် အသိပညာရှိရင် ကျွန်တော် အနေနဲ့ လုံးဝပူပန်ခြင်းမရှိ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့
ဥပမာ ၁၉၀ဝ နောက်ပိုင်း တစ်တစ်ချိန်ချိန်မှာ တရုတ်တစ်ချို့နဲ့အတူ ကွန်မြူနစ်ဝါဒဟာွ ဩစတြေးလျ ကို ဝင်လာပါတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံရေးသမားများ က အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေကို စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်လိုက်တော့ လူတော်တော်များများက လက်ခံတယ်။ လုပ်ပါစေတဲ့။
(မြန်မာပြည်မှာ ဆိုဖြစ်ပါ့မလား။ အခုထက်ထိ ကွန်မြူနစ်ဆိို ကြောက်နေကြတုန်းလို့
ထင်ပါတယ်) အဲဒီတော့ ဩစတြေးလျမှာ ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေ ထောင်ကြပါသတဲ့။
နောက်တော့ ဘာဖြစ်ပါသလည်း။ ဘာမှမဖြစ်ပါ ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားတော့ အဲဒီ ပါတီတွေဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီမိုကရေစီ ကို နှစ်ရာနဲ့ချီပြီး
သုံးလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကို ဘယ်သွားဆွယ်လို့ရပါတော့မလည်း။ အဲဒီလိုပဲ သူတို့ဆီမှာ မူဆလင်ဘာသာ ပြောင်းဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါ။ အဲဒီမှာ မူဆလင်မှ လူမျိုးစုံရှိတယ်နော် အများကြီး။ ဒါပေမဲ့ ozzy Caucasians တွေကိုတော့ ဆွယ်လို့မရပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ် နေထိုင်သူတွေဟာ၊ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဘာသာရေးအရ ဟိုလိုမလုပ်နဲ့ ဒီလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုတာတွေကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ငွေအင်အား လူအင်အား ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ဆွယ်လည်း မရတော့ဘူး။ အဲဗုဒ္ဓဘာသာ အတွေးအခေါ် အယူအဆကို လက်ခံကြတဲ့သူတွေတော့ တော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်။ လွပ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတာကိုး။ လက်ပဲခံတာနော် မြန်မာပြည်မှာလို ကိုးကွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တရားထိုင်ရင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြောင်း ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီး တွေ့ရပါတယ်။ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံက လူတော်တော်များများက လက်တွေ့လေ့လာကျင့်ကြံ အားထုတ် ပြီးမှ ယုံတာ။ “ဟေ့ ဘုရားသခင် ကောင်းကင်မှာရှိတယ် ကမာ္ဘပေါ်က အရာအားလုံးဟာ ဘုရားဖန်ဆင်း ပေးထားတာ“ လို့ ပြောရုံနဲ့ ယုံမယ့် လူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လို မိဘကိုးကွယ်လို့ သားသမီးက ဆက်ကိုးကွယ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ စကားမစပ် ဝန်ကြီးချုပ် Julia Gillard တောင် ခရစ်ယာန်မိသားစုက ကြီးပြင်းလာပေမဲ့ atheist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက တစ်ခြားဘာသာတွေ ကို respectရှိပါတယ်တဲ့။ (ကိုဖုန်းကျော်ကြီးတော့ အဲဒီအကြောင်းသိမှာပေါ့)။ အဲဒီတော့ နှစ် ၆ဝ ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဗျာ။ အဖိနှိပ်ခံရလို့ ဒီမိုကရေစိ ဆိုတာကို သွားချင်ကြတာ၊ တကယ်တမ်း
ဖြုသလား မဲသလား ကောင်းကောင်းမသိကြသေးဘူး။ အနဲဆုံး ယိုးဒယားနိုင်ငံလောက် ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုရှိရင်တောင် ဒီမိုကရေစီရပြီလို့ လက်ခံနိုင် သေးတယ်။ အဲဒီအခါကျ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာ ကိုယ်ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် စနက် မပါပဲ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်တာ။ ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီ စနစ် တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ နဲပါးသွား စေအုံးတော့ တစ်ခြားဘာသာများရဲ့ နှိပ်ကွပ်မှု၊ ကိုယ့်ဘာသာဝင် အချင်းချင်းနှိပ်ကွပ်မှုမှ ကင်းဝေးပြီး မိမိဘာသာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်နှိုင်မှာပါ။
ဘယ်ဘာသာ ကမှ အုပ်စီးထားလို့မရပါဘူး။ အခုဟာက ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီ မရောက်ပဲ တစ်ခြားဘာသာက ဝင်ရောက်အုပ်စိုးတော့မဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
သမ္မတကြီးပြောတဲ့ ”ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ဘာညာကွိကွ“ ဆိုတဲ့ အရာကြီးကလည်း သိပ်ပြီးပွင့်လင်းမှု မရှိသလိုပါပဲ။ rules of law ဟာ တကယ်ကို အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။ ပညာမတတ်ကြလို့ အမှားတွေဆက်တိုက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့
ပညာတတ်တဲ့ သူတွေပဲမှားနေကြတာ မဟုတ်ဘူးလား။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အဆိုးဆုံးပေါ့။ ပညာမတတ်တဲ့သူက ခံရတာပါ။ ကျွန်တော့် အဖေမိတ်ဆွေတစ်ယောက် သူ့ကိုပြောဘူးတယ်။ ဟိတ်ကောင် တတ်ဖို့မလိုဘူးတဲ့ နပ ်ဖို့ဘဲ လိုတယ်တဲ့ ။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ အရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ပြည်သူတွေကိုသာနှိပ်ကွပ်မယ် မူစလင်နိုင်ငံဆို အသေကြောက်။ ဒါတကယ့်အမှန်ပါ။ ဒါကိုအားလုံးက သဘောပေါက်နေတယ်။ အခုလည်း အကြမ်းဖက်တဲ့အတွက် သံရုံးကလူတွေ အတွက်စိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် ပြန်သာလာခိုင်းလိုက် ဒီအတိုင်းဆက်ထားရင် နောက်တစ်ခါ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် သူတို့တွေသေဖို့ပဲရှိတယ်။ အခုတော့ မဟုတ်ဘူး OIC ကိုမြွေပွေး ခါးပိုက် ပိုက်ထားချင်နေတယ်။ တစ်ခုတော့ ကျေနပ်တယ် ကိုယ့်ပြည်တွင်းရေး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကို။ အခုဟာဒီကောင်တွေက အရမ်းကို ပါဝင်ပတ်သက်လာပြီ။ ကိုယ့်ဖက်က မမာရင်တော့/ပြတ်ပြတ်သားသား မလုပ်ရင်တော့ ဒုခ ရောက်ပြီသာမှတ်ပေတော့။ ကျွန်တော်က တော့ ဒီကိစ္စ ဟာ သေးမသွားပဲ ကြီးလာအောင် လုပ်နေတယ်လို့ ပဲထင်တယ်။ ထင်ရာမြင်ရာလေးတွေ ဝင်ဆွေးနွေးတာပါ။ မှားနေတဲ့ အချက်လေးတွေရှိရင်တော့ ညွှန်ပြပေးကြပါ။ အခုတော့ ဝမ်းရေးအတွက် ချက်ပြုတ်ဖို့သွားလိုက်အုံးမယ်။ ကြုံရင် အောက်ကလင့်မှာ ဦးဘဂျမ်းကာတွန်းလေးလည်း ကြည့်သွားပါအုံး။ အဲဒီကာတွန်းလေးက တော့ ကျားကိုတရားဟောလို့ မရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ကျနော်ကြားရသလောက်ပေါ့ဗျာ။လူ ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရော၊သမ္မတရော ပြောနေတာမှာ
ပါ ပါနေတာတစ်ခုကတော့ ပညာမတတ်ကြလို ့ခုလိုမျိုးအမှားတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်လာတာဆို
အဲ့ဒါကတော့ ကျုပ်စကားဖြင့် သက်ဆိုင်သူတွေကို ပြောကြားစေဗျာ
အမှန်တော့ ဒီစကားကို ကျုပ်က ကော်မန့်အဖြစ်သာပြောတဲ့အတွက်
စာအုပ်ထဲပါတဲ့ ရှေးရိုးဘာသာရေးလုပ်နည်းလုပ်ထုံးတွေနဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာခြိမ်းခြောက်တဲ့
ခင်ဗျားတို့ အမျိုးတွေကို မျိုးသုန်းသွားစေတာဘဲအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်
ဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့အားပြိုင်မှု နဲ့ humanitarian…။ ဘယ်ဟာဥိးစားပေးမလဲ။ Irrawaddy ကသတင်းတပုဒ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က Rohingya တွေကိစ္စရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သိပ်မကြေနပ်ကြောင်း၊ သူမဟာ အစိုးရရဲ့ အစီအမံကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အင်အားမရှိပေမဲ့၊ ဒိလိုကိစ္စမှာ မှတ်ချက်သဘောထားပေးသင့်တယ်။ humanitarian point of view ကပေါ့။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ရေငုံနှုန်ပိတ်နေရတာအကြောင်းရှိပုံရပါတယ်။ သူကအမှန်တရားနဲ့ဖြစ်သင့်တာကိုဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်သိတတ်သူတယောက်လေ။ rule of law မရှိလို့ဖြစ်ရတာဆုတဲ့မှတ်ချက်ထက်ပိုပြောသွားတာဒီနေ့အထိမတွေ့ရဘူး။
အမှန်ကတော့ စစ်တပ်က ဝင်ထိန်းရာမှာ ဝင်ပုံဝင်နည်းမှားသွားတာ သိပ်သေခြာပါတယ်။ နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်ရာမှာ မိမိစိတ်ထဲအရိုးစွဲနေတဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒကို ဘေးချိတ်နိုင်သမျှ ဘေးချိတ်ကြဘို့လိုပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတန်းစီပြီး မေးခွန်းမေးကြည့်ပါလား။ Rohingya ဆိုတဲ့လူမျိုးကိုသူတို့ဘယ်လောက်မုန်းတီးကြသလဲ ဆိုတာ…..ပြေးမလွတ်ပါဘူး…။ ပြည်ပက တဖက်သတ်နဲ့ Rohingya များကိုဘဲအထောက်အပံ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်သင့်တဲ့ကိစ္စပါဘဲ။